Aliexpress - fivarotana an-tserasera elektronika, lamaody maoderina, kilalao, entana an-trano
AliExpress - fivarotana an-tserasera ny vokatra mety misy izay fantatry ny rehetra
Mankanesa any Aliexpress
Telefaonina sy akora
Solosaina sy birao
Kilalao, ankizy & zazakely
Firavaka sy famantaranandro
Kitapo sy kiraro
Trano & Zaridaina, fanaka
Môtô sy maotera
Fahasalamana sy hatsarana, volo
Fanatanjahantena & ivelany
Tsy misy mpampiasa Internet tsy mbola nitsidika ny tsena antsoina hoe AliExpress. Ity dia sehatra virtoaly manerantany ho an'ny fivarotana ireo entana marobe vita amin'ny fanamboarana sinoa. Ny tombony amin'ny magazay an-tserasera dia ny teti-bolan'ny vokatra. Tsy azo atao ny mitanisa ny fampielezana goavana ataon'ny mpitondra an'izao tontolo izao amin'ny varotra an-tserasera.
Aliexpress dia mivarotra entana amidy na mivarotra. Ny tetikasan'ny Internet AlibabaGroup dia raisina ho iray amin'ireo loharanon-tranonkala no notsidihina indrindra, ary tsy mitovy amin'ny fiasa ao aminy (fandikan-teny ho an'ny mombamomba ny tranokala amin'ny fiteny samihafa, ny fisian'ny sivana hametrahana toerana, sns).
AliExpress , afaka mividy vokatra atolotra an'ity tranokala ity ianao
Ny serivisy dia mandika avy hatrany ny angon-drakitra momba ny mpizara tsirairay amin'ny sehatra an-tserasera, mba hahafahan'ny mpampiasa mandinika ny toetran'ireo vokatra, manontany momba ny habeny misy, sns.
Mankanesa any Ali Express
Inona ny asan'ny fivarotana an-tserasera vita amin'izany?
Ny katalain'i AliExpress dia misy fizarana tematikana 13 - ny lisitr'ireo sokajy atolotra ho an'ny mpanjifa eo ankavanana,
izay mety mitady ireo vokatra ilaina. Amin'ny fiandohan'ny lisitra dia ny kojakoja ao an-tokantrano, telefaona, PC, birao fiasana ary entana elektronika,
satria izy ireo no tena takian'ny mpanjifa. Mividy amin'ny AliExpress modely finday vaovao sy fahagagana ara-teknolojia hafa
Eo an-tampon'ny pejy lehibe dia misy karoka fikarohana;
Eo anatrehan'ny sokajy vokatra vaovao, fihenam-bidy farany farany, sns .;
Misy fifidianana vokatra ara-toekarena amin'ny vidiny "hatramin'ny $ 5."
Fikarohana ho an'ireo mpampiasa ny sehatra AliExpress amin'ny rubles
Ny fizarana tematic dia manome voka-tsofina fanampiny amin'ny vondrona antsipirihany. Ny sokajy "ho an'ny ankizy rehetra" dia mizara ho azy ireo avy hatrany ireo mpanamboatra avy any Chine, mamorona vondrona vondrona (temotra, kiraro, seza fiara, sns).
Ny zavatra tiana iray dia azo ampidirina ao anaty Carte na ny faniriako foana. Ny isan'ny fividianana mety dia aseho eo an-tampon'ny kisary ka rehefa tsy mikaroka ny mpanjifa dia tsy hadinony ny hametraka baiko. Aliexpress dia azo fantarina amin'ny fitsidihana voalohany, satria na ireo vao manomboka aza dia afaka manapa-kevitra noho ny fanangonam-baovao:
Mandoa vola sy tolotra manokana AliExpress
Ny hery iray hafa an'ny AliExpress dia ny fomba fandoavam-bola be dia be. Ny mpanjifa dia manana fahafahana handoa karatra amin'ny banky (MasterCard, Visa, Maestro) na mampiasa rafitra fandoavana elektronika. Ny fandoavan'ny finday sy ny fandefasana vola dia azo ihany koa. Ho an'ireo vahiny vaovao amin'ny fivarotana an-tserasera dia misy maromaro ny fanomezana manokana. soso-kevitra hanampy anao hamonjy amin'ny fividianana voalohany sy manaraka anao:
Satroka ho an'ireo vao manomboka;
Fandraisana amin'ny fisoratana anarana amin'ny vavahady;
Discount amin'ny fametrahana ny fampiharana.
Ohatra iray amin'ny fampiroboroboana ny fikarohana dia ny tetikasa AliExpress. Ny tranokala ofisialy manana interface tsara, mora navigateur, isa tolotra mahavariana avy amin'ny mpanamboatra sinoa, manamboatra fivarotana mora ho sokajy - ary tsy izany no lisitry ny tombony amin'ny sehatra ara-barotra an-tserasera.
Ny ekipanay dia mitovy amin'ny mpitarika ny habaka amin'ny Internet. Serivisy misy ny fahaizana teknika tokana izahay, izay mandray anjara amin'ny fampiroboroboana haingana ny tranokala amin'ny TOP. Fiantohana tanteraka ny valiny - raha tsy nahomby ny fe-potoana hanatanterahana ny famerenam-bola feno! Miezaha mitady bebe kokoa - matokia ny matihanina fikarohana optimization!